Iskuul loogu magacdaray Dr Xuseen Sh. Axmed Kadare oo xariga laga jaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Iskuul loogu magacdaray Dr Xuseen Sh. Axmed Kadare oo xariga laga jaray “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa maanta xariga ka jaray Dugsiga Hoose Dhexe ee Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare, kaasoo laga hirgeliyay degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho.
Iskuulkan Hoose dhexe oo uu horey u dhagax dhigay Guddoomiyaha Gobolka banaadir ayaa waxaa loogu magac daray Allaha u naxariistee Dr Xuseen Sheekh Axmed Kadare, waxaana dhismahiisa iska kaashaday Hay’adda DRC iyo bulshada degmada C/casiis ku nool, waxaana guddoomiyaha iyo xubnihii la socday ay ku soo wareegeen fasalada uu ka koobanyahay iskuulkaasi.
Mudane Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa markii uu xariga ka jaray iskuulka Dr Xuseen Sheekh Axmed Kadare ayaa sheegay in Iskuulkan loogu magac daray nin Halyey ahaa oo baal dahab ah ka galay Taariikhda Soomaaliya, isla markaana ay ka faa’iideysan doonaan bulshada degmada C/casiis ku nool.
Ugu dambeyn Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay Iskuulkan uu yahay mid lacag la’aan ah, isla markaana macalimiinta wax ka dhigaya mushaarkooda uu bixin doono Maamuka Gobolka.
Su’aal ama talo haddii aad qabto ka qeyb gal barnaamijka Islaamka iyo bulshada